Eunice's Story – Embrace
Uh, umama u-Eunice lo okhulumayo. Ngithanda ukukhuluma ngezingane ezithanda ukuba nenkinga, ezibizwa ngo-special needs baby. Ukuthi ngicela ukuthi sizinakekele kakhulu lezi zingane, siziphe kakhulu uthando. Ngani?
Ngoba zitholakala zona zithanda ukuba nenkinga kubazali bazo. Manje bese ziyafika lapha koma-baby home kanjalo, ukuthi sizozigada, sizinakekele, siyikhuluse, uthole ukuthi ayikho esimweni esi-right. Idinga ukuthi inakekelwe ngaphezu kwezinto zonke mhlawumbe.
Bakhona abaphathi bendawo, bayithathe bayise kodokotela abazoyenza izimfanelo zakhona, ukuthi nayo ikhule ibe right njengezinye izingane.
Ngakho-ke, ngiyacela ukuthi sizinakekele lezi zingane, siziphe usizo. Uma uyibona ukuthi inenkinga uyinikeze usizo, nothando. Nabanye-ke beze basisize nathi, babone ukuthi, ngoba kwesinye isikhathi kuyakhulumeka, kufakeke namafotho kanjalo, ukuthi mhlawumbe ingane inenkinga yabo, ikwazi ukuthola usizo ezindaweni ezifanele ukuthi ingathola usizo.
Read Eunice’s story in English here